Dadka U Dhashay Dalka Shiinaha Oo Ka Qanisan Muwaadininta U Dhashay Dalka Maraynka.. | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada
Dadka U Dhashay Dalka Shiinaha Oo Ka Qanisan Muwaadininta U Dhashay Dalka Maraynka..
Published: October 19, 2016, 2:07 pm
(0) Comments Liiska dadka lacagta leh ee Shiinaha ayaa mar kale sheegaya in dadka lacagta balaayiinta dollar haysta ee Shiinaha ay ka badan yihiin kuwa Maraykanka, isla markaan aay si joogta ah u kordhayaan.
Ninka ka ganacsada guryaha ee Wang Jianlin ee shirkadda Dalian Wanda, ayaa ugu horeeya liiska 594 qof ee balaayiinta dollar leh ee Shiinaha isaga oo ka horreeya 535 qof ee Maraykan ah ee balaayiinta dollar leh.
Ninka iska leh Alibaba ee Jack Ma, ayaa galay kaalinta labaad, iyadoo lacagtiisii ay koradhay 41% intii ay sanadkii hore ahayd.
Liiskan sanadlaha ah ayaa waxaa soo saaray Hurun oo lala barbardhigo liiska Forbes ee ka soo baxa Maraykanka.
Warbixinta Hurun ayaa la soo saarayay siddeed iyo tobankii sano ee ugu danbeeyay.
Laakiin, taajiriinta Shiinaha ayaan ka mid ahayn labaatanka qof ee ugu lacagta badan adduunka.
Ninka ugu horeeya dadka lacagta leh ee Shiinaha Wang Jianlin, ayaa haysta lacag dhan $32.1 oo bilyan.
Jack Ma oo leh Alibaba ayaa ku xiga oo leh $30.6 oo bilyan, Pony Ma oo leh Tencent ee ciyaaraha internetka ayaa ah qofka saddexaad ee ugu lacagta badan Shiinaha isagoo leh $24.6 bilyan.
Yao Zhengua oo leh shirkadda Baoneng Group, ayaa galay kaalinta afraad isagoo leh $17.2 oo bilyan.
Dadka Shiinaha ee leh balaayiinta dollar ayaa intooda badan ay ku nool yihiin magaalada Beijing, waxaana ku soo xiga magaalooyinka Shenzhen, Shanghai iyo Hangzhou.
Caalamka, liiska Forbes ee dadka lacagta leh waxaa ugu horeeya Bill Gates ee Microsoft oo leh $75bilyan, waxaana ku xiga Amancio Ortega ee leh Zara iyo maalgashtaha Warren Buffett.
« Warbixinta Ka HoreysayQoraal Gaaban Oo Ku Saabsan Ramla Bintu Abu-Sufyaan (Rc): Gabadha Iimaankeedu Adkaa!	Warbixinta Xigto »Sidee bay uga soo kabatay Musiibadi ku dhacday? Weerarkii Aashitada..!!	HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Leave a Reply Cancel reply